Ifektri yekhofi - Abakhiqizi betafula laseChina, abahlinzeki
Idizayinelwe i-minimalist edinga ukugcinwa okuphezulu, leli tafula lekhofi lokuphakamisa lesimanje lilungele noma iliphi igumbi lokuphumula. Iqedile nge-lacquer emhlophe emhlophe, imigqa yayo ehlanzekile ye-chic ibhanqiwe ne-chrome yesimanjemanje epholishiwe. Abaqambi bathanda ukuphakama kwayo okulula.
Leli tafula lekhofi elimhlophe eliphakeme elihlanganisayo lihlanganisa ukuzijabulisa nokusebenza kwabantu. Ifaka indawo yokuphakama eguquguqukayo enikezela ukuphakama okuhle kuwe lapho usebenza noma uphuza inkomishi yekhofi, kanye nesitoreji esifihliwe ngaphansi kwethebula lesikhala kanye nendawo yokugcina ngaphansi kwetafula phezulu okwenza lolucezu oluhle lusebenze futhi, kufanelekile ukuba!
Amathebula wekhofi we-YF-2001 Lift-Top Coffee Akumangaza Ngendlela Engcono Kakhulu
Ngokuvumelana negama layo, itafula lethu lekhofi eliphefumulelwe maphakathi nekhulu leminyaka lifaka phezulu okuzivelelayo ukuveza indawo yokugcina efihliwe. Isiphetho sayo se-walnut veneer sigcwaliswa phezulu kweqabunga lemabula ukuthola isikhala esingeziwe sokubeka amashalofu - silungele ukuthola izincwadi ngesikhathi sokuhlangana okulandelayo.